Ny ekipazy British Airways dia mampiasa iPads
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Ny ekipazy British Airways dia mampiasa iPads
Aogositra 31, 2011
HARMONDSWORTH, Angletera - Ny ekipazy British Airways dia mampiasa ny maodely iPad farany mba hitondra refy vaovao amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa eny amin'ny rivotra.
Ny iPads dia mamela ny ekipa kabinina hanana fahatsiarovan-tena mialoha momba ny safidin'ny mpanjifa sy ny fahatakarana bebe kokoa ny fandaminana ny dia nataon'ny mpanjifa teo aloha, ahafahan'izy ireo manolotra serivisy voatokana ho azy manokana.
Ny iPad dia mamela ny mpiasa an-tsehatra hamantatra haingana ny toerana ipetrahan'ny mpanjifa tsirairay, ny olona iarahany mandeha, ny toeran'ny Executive Club ary ny fangatahana sakafo manokana. Manome tranomboky fampahalalana iray manontolo eo an-tanan'izy ireo, toy ny fandaharam-potoana, boky torolàlana momba ny fiarovana ary fanavaozana ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Midika koa izany fa ny olana rehetra dia azo ampifandraisina amin'ireo mpiara-miasa monina eny ifotony manodidina ny tambajotra alohan'ny fiaingany ka afaka atolotra ny vahaolana raha mbola mandeha ny sidina.
Rehefa niditra ny mpandeha rehetra ary taloha kelin'ny nanidiana ny varavarana dia omena horonam-taratasy lava ny mpiasan'ny kabinetra, mitanisa mpanjifa 337. Miaraka amin'ireo ekipa mpiasan'ny iPads vaovao dia hamelombelona fotsiny ny efijery rehefa nakatona ny varavarana amin'ny tambajotra 3G tsy misy tariby ary hanana lisitr'ireo mpandeha ao anatiny izy ireo.
Bill Francis, lohan'ny traikefa an-tserasera an-dalambe an'ny British Airways, dia nilaza hoe: "Ny iPad dia mamela antsika hanolotra serivisy an-tserasera manokana, fa ny fahafaha-manao fampandrosoana amin'ny ho avy dia tsy misy farany. Mahazo valiny tsara avy amin'ny ekipazy sy ny mpanjifa izahay. Io dia ahafahan'ny ekipa manolotra serivisy fandinihan-tena tadiavin'izy ireo ary raisina ho toy ny vahiny mendrika ny mpanjifa. ”
Ny iPad amin'izao fotoana izao dia andramana amina ekipazy miisa 100 manana tanjona hamoaka izany amin'ireo mpiasa antitra rehetra manerana ny seranam-piaramanidina mandritra ny volana ho avy.